नेपाली ट्विटर समुदाय व्दारा पवित्र समाज सेवालाई सहयोग @tfcNepal [Tweet For Cause]
Posted: 23 Apr 2011 10:37 AM PDT
ट्विटर चलाउने नेपालीहरुको एक समूहले आज काठमाडौँ बसुन्धारा मा रहेको पवित्र समाज सेवालाई सहयोग गरेको छ । दीक्षा चापागाईँ व्दारा सञ्चालित सञ्चालन पवित्र समाज सेवालाई 'Tweet For Cause Nepal' नामक नेपाली युवाहरुको ट्विटर समूहले करिब पन्ध्र हजार बराबर को आर्थिक सहयोग गरेको हो । समूहले चिनी, चिउरा, तेल, जुत्ता चप्पल, स्टेशनरी सामान, भाँडाकुँडा आदि विभिन्न कुराहरु उक्त अनाथालयलाई सहयोग गरेको थियो । पवित्र समाज सेवामा बिस जना साना बालबालिकाहरु आश्रित रहेका छन् । विगत ६ वर्ष देखि दिक्षा चापागाईले पवित्र सेवा समाज चलाइरहनु भएको छ । आजको कार्यक्रममा करिब १६ जना नेपाली ट्विटर प्रयोगकर्ताहरु को उपस्थिति थियो ।
ट्विटरमा रम्ने नेपाली युवाहरुको समुह ले "ट्विटर बाट समाजसेवा गरौँ" भन्ने अभियान केही महिना अघि देखि सुरु गरेका थिए । माइक्रो ब्लगिङ साईट ट्विटर बाट सम्भवत पहिलो पटक नेपाल मा यस्तो अभियान गरिएको हो । ट्विटर मार्फत 'बारक्याम्प' जस्ता कार्यक्रमहरु पहिले पनि काठमाडौँ आयोजना गरिसकेको भएपनि, यसरी प्रत्यक्ष समाज सेवा गरेको भने पहिलो पटक नै हो ।
नेपाली युवाहरु विच लोकप्रिय हुँदै गएको माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरबाट नेपाल मा पहिलोपल्ट यसरी अभियान थालिएको हो तर फेसबुक मार्फत भने यस्ता कार्यक्रमहरु पहिले देखि नै भइरहेका छन् । ट्विटर मार्फत भेट भएका साथीहरु बिच भेटघाट गर्ने क्रममै, आफू मात्र रमाइलो गर्ने नभइ अरु को मुहारमा पनि खुशी ल्याउन, केही काम ट्विटर मार्फत गरौँ भन्दै 'TFC Nepal' को 'कन्सेप्ट' निकालिएको थियो । प्रति ट्विट गरे वापत, २० पैसा यस अभियान को लागि छुट्याउने सहमति गर्दै नेपाली ट्विटर प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो ट्विट अनुसार को रकम 'TFC Nepal' मा जम्मा गरेका थिए । अनि सबै को सहमतिमा पहिलोपटक पवित्र समाज सेवालाई सहयोग गरिएको थियो । नेपाल मा भएका मात्र नभइ विदेशमा भएका नेपाली युवाहरुले समेत, यस अभियान को खुलेर प्रशंसा गरेकाछन् र आफ्ना सहयोग रकमहरु पठाइरहेकाछन् । यस प्रकार का सहयोगहरु भविष्य मा पनि निरन्तर जारी रहने भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल का साइटहरु बाट ट्युनिसिया तथा इजिप्ट लगायतका देशमा आन्दोलन गरिएको थियो । भर्खरै जापानमा आएको सुनामी को खबर पनि ट्विटर मार्फत संसार भर फैलिएको थियो । ट्विटर मा रमाईला र जानकारी मुलक कुराहरु गर्ने मात्र नभइ, ट्विटरबाट समाजसेवा जस्तो पवित्र काम पनि गर्न सकिन्छ भनेर नेपाली युवाहरु ले देखाइदिएकाछन् । आफ्नो व्यस्त जिवनबाट अलिकति फुर्सद निकालेर ट्विट गरेर ट्विटरमा रमाउने नेपालीहरु, समाजसेवाका अतिरिक्त ट्विटरमै 'ट्विट डिबेट' जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेकाछन् । 'ट्विट डिबेट' मा हप्तै पिच्छे, एउटा विषयमा बहस र छलफल हुने गरेको छ,त्यस्ता बहसहरु नयाँ कुरा थाहा पाउन सहायक सिद्ध भएको छ ।
नेपाल र नेपाल बाहिर रहेका नेपाली युवाहरु ट्विटर मा छलफल गरिरहेका हुन्छन्, आफ्ना विचारहरु राखिरहेका हुन्छन् । ट्विटरमा नेपाली युवाहरु यति मोहित भएका छन् कि, सबैलाई एकै घरका सदस्यहरु झैँ लाग्ने गरेको छ । उनीहरु सँधै भेटिएको वा आफ्ना पुराना साथिहरु सँग कुरा गरेझैँ, रमाइला, हाँसो र ठट्टा गरिरहेका हुन्छन्, अनि अप्रत्यक्ष रुपमा 'TFC Nepal' को अभियानलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । रमाइलो सँगै, समाजसेवा पनि गरिरहेका युवाहरु यो अभियानलाई जारी राख्न लागिपरेका छन् । आज पवित्र समाज सेवा मा जमघट भइरहँदा व्यस्तता का कारण उपस्थित हुन नसकेका वा विदेशमा रहनु भएका नेपाली प्रयोगकर्ताहरुले ट्विटर मार्फत अनलाईन समर्थन जनाइरहनु भएको थियो ।
TFC Nepal को बारेमा अझ धेरै जान्न को लागि TFCNepal ब्लग हेर्नुहोला !
ट्विटरमा रमाइलो गर्दै, ट्विट गर्दै समाजसेवा गर्न चाहनुहुन्छ, अरुको मुहार मा खुशी ल्याउन चाहनुहुन्छ भने ट्विटरमा @tfcNepal लाई फलो गर्नुहोस् ।
(Photos will be uploaded later)
Posted: 22 Apr 2011 08:26 PM PDT
मेरो भन्नु : दोस्रो अनुच्छेद मा लेखक कन्फ्युज देखिए झैँ लागेको छ । तत्कालिन समयमा कान्तिपुर ले विज्ञापन नपाएको प्रसंग उठेको थियो, त्यसपछि रियल जुस को बारेमा जमेर लेखिएको भन्ने सुनेको थिँए । त्यस समयमा, रियल जुसको भण्डाफोर गरेर कान्तिपुरले "वाहवाही" कमाएको थियो अत: यसलाई मिलाएर बुझिदिन हुन, आग्रह गर्दछु !
You are subscribed to email updates from Aakar Post